PROPERTY BENCHMARK PRICES FOR YEAR 2019-2020 (Nay Pyi Taw Union Territory) – JVMyanmar
Nay Pyi Taw (Union Territory) Benchmark Prices on Land Selling/Buying for 2019-2020 Financial Year
Nay Pyi Taw Benchmark Prices report for 2019-2020 financial year for real estate sector was released by Internal Revenue Department (IRD) on September, 2020. Nay Pyi Taw City, the capital city of Myanmar, is located in the center of Nay Pyi Taw Union Territory. Nay Pyi Taw is the unusual combination of large size and very low population density. It coversatotal of 70,571 Square kilometer and the current population is approximately over 1 million. Nay Pyi Taw administratively consists of eight townships; Zabu Thiri, Zeyar Thiri, Ottara Thiri, Dakkhina Thiri, Pobba Thiri, Pyin Ma Na, Lal Way and Tatkon.
According to the government land benchmark price information, we have learnt that there are no fluctuation of the land prices in Pyin Ma Na, Lal Way and Tatkon Townships. The remarkable reduction in price is found in Yarza Htar Ni Road in Pobba Thiri Township which drops by 49% of last year prices. In Dakkina Thiri Township, the prices are almost stable except in Shwe Pyi Taw Street which falls by 12% of recent year. The land price in Pyin Ma Na-Taungnyo road in Zabu Thiri Township, the most expensive place in Nay Pyi Taw Union Territory, decreased to 1,800,000,000 MMK/acre which is 28% lower than that of last year. To be concluded, we have learnt that there is no township rising land prices in Nay Pyi Taw Region.
However, having said that in the previous article of Yangon Benchmark Prices, the benchmark prices are referenced for the tax purpose only, the actual market prices could be relatively higher than the benchmark prices described in the report.
Please click the following link to learn sample property benchmark prices for Pyin Ma Na Township, Nay Pyi Taw Union Territory for 2019-2020.
Land Benchmark Prices for Pyin Ma Na Township for Year 2019-2020 levied by Price Valuation Board( Nay Pyi Taw Union Territory)
၂၀၁၉–၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်မြို့အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် ကာလတန်ဖိုး သတ်မှတ်ပေးမည့် မြေကွက်စံနှုန်းများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် နေပြည်တော်မြို့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍအတွက် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးသည့် အစီရင်ခံစာကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နေပြည်တော်မြို့တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်။ နေပြည်တော်သည် နယ်နိမိတ် အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးသော မြို့တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ နေပြည်တော်အား ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဇေယျာသီရိ၊ ဥတ္တရ သီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး နှင့် တပ်ကုန်း ဟူ၍ မြို့နယ် ၈ မြို့နယ်နှင့် ဖွဲစည်းထားပြီး ဧရိယာ အကျယ် အ၀န်း စုစုပေါင်း ၇၀,၅၇၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိကာ လူဦးရေ ၁သန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်ထားသော နေပြည်တော်၏ ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် စာရင်းများ အရ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး၊ တပ်ကုန်း မြို့နယ်များတွင် ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရာဇဌာနီလမ်းပေါ်ရှိ မြေကွက်များဈေးမှာ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ်တွင် ရွှေပြည်သာလမ်းမတွင် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခြင်းမှလွဲ၍ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်လုနီးပါးရှိပါသည်။ နေပြည်တော်မြို့တော်တွင် ဈေးအကြီးဆုံးနေရာဖြစ်သော ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ပျဉ်းမနား-တောင်ငူလမ်းမပေါ်ရှိ မြေဈေးမှာ တစ်ဧကလျှင် မြန်မာကျပ် သန်း တစ်ထောင့်ရှစ်ရာ ဖြစ်ပြီး အရင်နှစ်ထက် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပါသည်။ အနှစ်ချုပ်ရသော် နေပြည်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မည်သည့်မြို့နယ်မှ မြေဈေး တက်ခြင်းမရှိပါ။
သို့သော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွက် အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အဆိုပါ ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များမှာ ၀င်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးမှာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ် နေပြည်တော်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောအိမ်ခြံမြေကာလတန်ဖိုးများအား လေ့လာရန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လင့် တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြပ်နှစ် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အတွက် ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့် မြေကွက်စံနှုန်းများ (နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ)